SIDEE SI DHAKHSO AH U BIQILAA MIRAHA KAROOTO KA HOR BEERASHADA: INTEE IN LE'EG AYEY TAHAY IN LA FULIYO HABKA, SIDA LOO SAXO IYO MAXAY YIHIIN HABABKA BEEREEDKA? - BEER CAGAARAN
Ma u baahanahay inaan Gagaashka miraha abuuro ka hor inta aan la beeri? Sidee si dhakhso ah u sameeyaan?
Ku dhowaad ninkii beerta ka shaqeeyaa xayawaanka beerta sannad walba wuxuu jebiyaa beer ama laba ka mid ah mid ka mid ah dalagyada caanka ah ee caan - karootada. Laakiin, nasiib daro, dad badan ayaa ogaanaya dhibaatooyinka leh biqilka khudradda, qaar ka mid ah xayawaanku waxay maareynayaan dabacasaha dhowr jeer xilli.
Xaqiiqdu waxay tahay in miraha dabiiciga ah ee boqolkiiba ballaaran ay ku jiraan saliidaha lagama maarmaanka ah ee ka hortagaya in qoyaanka qoyaanka gudaha, taas oo ah sababta ay u biqilka si tartiib ah. Xalka awood u leh dhibaatadan waa diyaargarowga hordhaca ah ee miraha dabiiciga ah ee beeridda, iyo xataa si ka fiican, iyaga oo dhalaya.
Waa maxay dhalashada?
Burburintu waa geedi socod badan oo tallaabo ah oo ay ka mid yihiin qoyaan qoyan, kormeer joogta ah ee xaaladooda, taas oo ah natiijada miraha waa in la dhalaalaa. Muhiim ma aha in mawduuc laga beero si loo biqlo., waxaa lagu aasaa karaa dhulka iyo foomka qalalan, laakiin kiiskan boqolkiiba biqilka ee dhaqanka noqon doonaa mid aad u hooseeya.
Giriiggu way ka duwan tahay habab kale oo loo diyaariyo abuurka beeraha (tusaale ahaan, soaking) farsamada iyo natiijada: marka lagu daro abuurka, waa in si habboon loo quudiyo qoyaan, taas oo ah xoojinta qaybta iyo koritaanka abuurka, jeermiska abuur kasta waa inuu u muuqdaa inuu ilmuhu yar yahay.
Waqtigee intee le'eg ka hor inta aan la beeri Karin baahida loo qabo in la fuliyo nidaamka
Seeds leh sprouts firiiray ayaa lagula talinayaa in lagu beeray isla markiiba dhulka., sida caleemaha jilicsan ayaa si fudud u qallajin kara, iyada oo ay ku jiran saamaynta hawada muddo dheer. Ka dibna boqolkiiba sare ee biqilka waa la illoobi karaa. Seeds of karootada sida caadiga ah waxay bilaabaan inay Gagaashaan maalmo badan sida lagama maarmaanka u ah soo bixitaanka sprouts. Xaddiga waqtiga loo baahan yahay waxay kuxirantahay habka biqilka loo doortay.
Haddii miraha horey u soo baxeen, iyo cimilada, tusaale ahaan, weli aan la dhicin, ka dibna waxaa laga badbaadin karaa qalajinta sida soo socota:
ku duub maro qoyan;
ka dib - bac caag ah;
taas oo loo diri karo miro-qabka qaboojiyaha.
Halkaas waxay si degan u sugi doonaan cimilada xun dhowr maalmood.
Iyada oo ku xiran habka abuurka biqilka ayaa la dooran doonaa, liisaska ayaa isbeddelaya.
Habka filimka suufka dhererka leh, dharka adag, filim caag ah.
Wixii dhalaalaya by bubbling waxay ubaahan tahay hanta qoto dheer (waxaad awoodi kartaa saddex litir oo litir ah), bambo-hawleedka aquarium.
Wixii biqilka abuur ee bacda Waxaad u baahan doontaa bac ah muraayad yar oo yar, adigoon u xirneyn (waxaa si adag loo xirayaa mar dambe) iyo majarafad baraf ah.
Wixii biqilka abuurka ee kor u qaadayaasha koritaanka daroogooyinkaas ayaa loo baahan doonaa (Zircon, Appin, Vympel, Kemira-Universal) iyo weelasha qotoda dheer.
Oo, dabcan, iyadoon loo eegin qaabka biqilka loo dooran doono, ninkii beerta ka shaqaynayay wuxuu u baahan doonaa abuur iyo biyo (waa ka fiicnaan haddii la dejiyo ama lagu dhajiyo sida ikhtiyaar).
Si aan marka hore u dooran kaliya abuurka tayo sare leh ee beereedka laga dhalin karo, waxaa lagama maarmaan ah in la yiraahdo nooc ka mid ah "tijaabo" ka hor inta biqilka:
Waxyaabaha abuurka ah si aad u buuxisid weel nadiif ah, oo laga buuxiyo biyo heerkulka qolka oo tago dhowr saacadood.
Natiijo ahaan, tijaabooyinka tayada sare leh waxay ku dul degi doonaan meesha ugu hooseysa taangiga, halka kuwa xuni ay ku fiiqi doonaan dusha sare. Waxay sidoo kale u baahan yihiin in la ururiyo oo la tuuro: marna ma kasoobi doonaan.
Qeybta hoose ee weelka hoose iyo kan ballaaran waa in la dhigo lakab cad oo cufan, taas oo ay lagama maarmaan tahay in la kala saaro abuurka leh lakab khafiif ah.
Next - abuur ah waxaa lagu daboolay lakabka kale ee qalabka cufan, taas oo si fiican u qoyan biyo. Biyaha waa in aan la daadin: xad-dhaaf ah oo qoyaan kicin kara kallana abuur.
Weelka waa in si adag loo xiraa caag balaastig ah oo lagu meeleeyo meel diirran, heerkulka taas oo u dhaxeysa + 22C - + 27C.
Waa in aynaan hilmaamin in abuurka la beddelo 2 jeer maalintii si loo hubiyo helitaanka buuxa ee oksijiinta iyo ka hortagga ciriiriga. Caleemaha ugu horreeya waa inay horey u muuqdaan 3-4 maalmood kadib, iyada oo la bixinayo shuruudaha oo dhan.
Seeds ayaa si toos ah loogu beeray beerta:
Si aad tan u sameyso, waa inaad sariirta u diyaarisaa sida waafaqsan sharciyada oo idil.
Waxyaalaha abuurka waa in la dhigaa dusha dhulka. Waa inaan lagu aasi, laakiin waa in lagu daboolaa caag balaastig ah (dhererka farqiga u dhaxeeya dusha sare ee ciidda iyo polyetylen waa inay ahaataa ilaa 12 sentimitir): tani waxay abuurtaa xaaladaha aqalka dhirta wanaagsan ee lagama maarmaanka u ah biqilka degdegga ah ee waxtarka miraha. Caleemaha ugu horreeya waa inay soo muuqdaan 6 maalmood gudahood.
Sidoo kale, meeshii biyaha ah, waxaa suurtagal ah in la isticmaalo waraabinta biyaha ee biqilka. - Waxyaabaha loo yaqaan "synthetic material" oo awood u leh inay biyo nuugaan, si weyn u kordhaya size:
On lakabka qoyan ee hydrogel ku meeleeyay abuur karooto.
Xagga sare - lakabka kale ee maaddada synthetic. Goobta noocan oo kale ah, abuurku wuxuu helaa wax kasta oo loo baahan yahay barar, laakiin isla markaa, khatarta ah in lagu daboolo caaryada ama lakabka ayaa si weyn hoos loogu dhigaa. Caadi ahaan, dhowr maalmood ka dib, caleemaha ugu horreeya waxay bilaabaan inay ka muuqdaan awoodda.
Marka barafku bilaabo inuu barafka ku bilaabo, bacda maro leh miraha waa la xiri karaa dhulka diga.
Meeshan waa in la calaamadiyaa oo la daboolaa barafka. Qiyaas noocan oo kale ah ayaa kaa caawin doonta inaadan bilaabin geeddi-socodka koritaanka abuurka, laakiin sidoo kale waxay u hoggaansan yihiin inay adkaadaan. Ka dibna, miraha kama cabsanayso dhibco heerkulka ama cimilo xun. Sida caadiga ah, sprouts waxay bilaabi doontaa inay ciriirto 11 - 13 maalmood.
Biyaha ku jira (bubbling)
Qaadashada waa hab lagu xawilayo biqilka abuurka, oo ku saleysan daaweyntooda hawo ama oksijiin, taas oo horseedaysa waxqabadka geedi socodka koritaanka. Tiknoolajiyada biqilka ee biyaha daadadku waa sida soo socota:
Seeds waxaa la dhigayaa meel hoose ee taangiga, dhalada waxaa ka buuxsamey biyo.
Tuubada dab-bakhtiiyaha ah ee biyaha kuleyliyaha ah waa in la yareeyaa gudaha taangiga, oo uumi dhammaadka biyaha, oo qalabka geli. Oxygen galaya qalabka biyaha, waxay gacan ka geysan doontaa biqilka degdegga ah ee abuurka.
Sida ikhtiyaarka ah: abuurka waxaa lagu ururin karaa bacda linenka ah, oo ah in si adag loo xirxiro. Bacda waa in la siiyaa si toos ah hoostada hawada aeratoriga ah, kaas oo ku shubaya oksijiinka biyaha.
Laba jeer maalintii, biyaha waa in la beddelo, haddii kale natiijada la rabo lama gaari doono.
Calaamadaha ugu horreeya ee biqilka (ka dib 2 ilaa 3 maalmood), aerator ayaa la damiyaa, miraha waxaa si taxaddar leh looga saaraa iyadoo lagu marayo dhowr lakab oo ah dhar fudud.
Natiijooyinka wanaagsan waxaa sidoo kale laga helaa habka biqilaadda miraha dabiiciga ah ee xalka koritaanka kobcinta. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay:
Maqaarka dharka u geli weel dhoobo leh, kaas oo abuurka lagu dhejiyo si xor ah.
On top of abuur cover maro kale, kaas oo waa in la hor-qoyan leh xal of kiciya kobcinta (habka of sulubo biyo iyo qiyaasta - si adag sida ay u tilmaamaha).
Dareem leh miraha la adkeeyay leh polyetylen. Sida caadiga ah, mudada sida qoyaanku waa 10 ilaa 12 saacadood.
Waa maxay habka ugu dhaqsaha badan?
Ka dib marka la falanqeeyo dhammaan hababka biqilka, waxaa la soo gabagabeyn karaa in habka ugu dhaqsiyaha badan loo hubiyo in biqilka foornadu ay tahay filim (qallajinta waxaa lagu sameeyaa biyaha ama xal aqueous of stimulant).
Waqtiga ugu dheer waa inuu sugaa calaamadaha biqilka - habka bacda. Tani ma ahan wax la yaab leh: habka heerkulka oo saameeya sheyga beerto waa mid hooseeya. Waxaa suurtagal ah in la dedejiyo geedi socodka geedka abuurka 1 - 3 maalmood iyada oo la adeegsanayo habab fudud oo dhakhso ah dadweynaha:
Shub miraha biyo kulul (+ 43S - + 50S). Seed waxaa lagu dhejin karaa darmuus ama weel dhalada ah, ku shub biyo (qasabadda waa in lagu xiraa shukumaan ama qalab kale si loo ilaaliyo heerkulka loo baahan yahay) 30 daqiiqo.
Ku qoyso vodka. Bacda wax lagu duubo waxaad u baahan tahay inaad buuxiso abuurka, xir oo ku rid weel si leh vodka oo lagu iibsado dukaanka 10 - 15 daqiiqo. Kaddib marka laga soo saaro aalkolada, bacda waa in lagu dhejiyaa biyo socda.
Ku shaqeynaya. Markaad dhiseysid wax ka mid ah boorsada labajibbaaran (xargaha wareega ee lugaha, daboolay naylon, oo lagu riday balaastig caag ah), maaddada abuurka waxaa lagu dhejiyaa weel, biyo kulul ayaa lagu shubay sidoo kale (waa inaysan gaarin abuurka) oo daboolka oo dhan daboolo, waxkasta oo habeenkii ka tago.
Ku qoy biyo. Bannaanka u badan ayaa lagu soo rogay habkan si loo dedejiyo biqilka ee miraha karooto. Si arrintan loo sameeyo, wax soo saarka waxaa lagu shubay biyo diirran (waxaa wanaagsan in la dhigo bacda linenka ah) oo ka baxdo habeenkii.
Ku qooji hydrogen peroxide. Habkani waa mid la mid ah kii hore, laakiin halkii baddalaadku waa in laga buuxiyaa hydrogen peroxide (0.5%), wakhtiga soosaaridana wuxuu yareeyaa 15 - 20 daqiiqo.
Waxaan soo bandhigi doonaa si aad u aragto fiidiyo muuqaal leh hab kale si aad uga saarto miraha karooto:
Bixinta boqolkiiba wanaagsan ee biqilka ee miraha karooto noqon kartaa hab sahlan oo wax ku ool ah - biqilka hore. Iyadoo waqti yar iyo dadaal ku bixisay, ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu heli doonaa abaalmarin la qiimeeyo: geedo isboorti ah oo labbis ah oo dalagyada beerta ku yaal. Sidaa daraadeed, si aan dhib loogu keenin "madax-furashada" ee dabacasaha, waxaa fiican in la qaato diyaarinta hordhaca ah ee ay abuurto beeritaanka iyo kaabidda.